Izifundo zaseJalimane zeBanga le-9
Bafundi abathandekayo, kunekhulu lezifundo zaseJalimane esizeni sethu. Phezu kwezicelo zakho, siqoqe lezi zifundo zabafundi bamabanga aphansi naphakeme futhi sazihlukanisa ngezigaba. Sihlukanise izifundo zethu zaseJalimane, ezilungiselelwe ngokuhambisana nohlelo lwezifundo lukazwelonke olusetshenziswe ezweni lethu, zabafundi bebanga le-9 sazibala ngezansi.
Ngezansi kunohlu lwezifundo zethu zaseJalimane ezikhonjiswe kubafundi bebanga lesi-9 ezweni lethu lonke. Uhlu lwamayunithi aseJalimane olungezansi luhleleke kusuka kokulula kuya kokunzima. Kodwa-ke, ukuhleleka kwezihloko kungahluka kwezinye izincwadi zokufunda zaseJalimane nakwezinye izincwadi ezengeziwe.
izikhundla eziboniswe ngokujwayelekile ukuya ebangeni lesi-9 eTurkey zifaka, kepha kungenzeka zingacubunguli amanye amayunithi ngokuya ngokuthanda kothisha waseJalimane, noma zingangezwa ngokuqhubekayo njengamayunithi ahlukanisiwe acutshungulwa, amanye amayunithi angavunyelwa ekilasini le-10 ekilasini elilandelayo.
Izifundo ze-9 zeBanga lesiJalimane
Ukubingelela kwamaJalimane namakhodi wokuzethula waseJalimane
Ama-General Speech Patterns ngesiJalimane
Amaphethini Wengxoxo Jikelele ngesiJalimane
Izigwebo Zokuvalelisa ZaseJalimane
I-Aylar yaseJalimane, izinkathi zonyaka zaseJalimane
Imibhalo ethile kaDer Das Die ngesiJalimane
IsiJalimane kwakungu-ist das?
Isifundo sase-German Prasens
Izinkolo Zesampula ZaseJalimane
Amalungu omndeni waseJalimane
Bafundi abathandekayo, ngokwezifundo zikazwelonke zemfundo, izihloko ezithathwa ezifundweni zaseJalimane ebangeni lesi-9 zingenhla. Sikufisela impumelelo yonke ezifundweni zakho zaseJalimane.
# Izifundo ze-9 zeBanga lesiJalimane
Qaphela: Sihlala sizama ukukunikeza ulwazi lwakamuva. Lesi sihloko osifundayo sabhalwa okokuqala cishe ezinyangeni eziyi-12 ezedlule, ngomhla ka-08 Disemba 2020, futhi lesi sihloko sagcina ukubuyekezwa ngomhla ka-24 kuZibandlela 2020.
I-Substantiv ngesiJalimane - iGenitiv
Tags: 9. Izifundo zaseJalimane, 9. inkulumo yesi-German yesifundo, I-9 yesiJalimane. inkulumo yesifundo sekilasi